Ku muuji galka qarsoon ee Codsiyada Ubuntu 11.10 bilawga | Laga soo bilaabo Linux
Ku muuji galitaannada qarsoon ee Ubuntu 11.10 Codsiyada Bilowga
Tilmaamkan waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo codsiyada qaarkood oo u muuqda kuwa ku qarsoon xulashada Codsiyada Bilowga en Ubuntu 11.10.
Sida uu sheegayo qoraaga maqaalka, wuxuu u baahday inuu ku daro oo ka saaro qaar ka mid ah codsiyada bilaabmay markuu soo galay fadhigiisa, laakiin, markuu eegay xulashooyinka Codsiyada Bilowga, in yar baa soo baxday oo ma ahan kuwa xiisaynayay.
Tani waa sababta oo ah qaabeynta codsiyada ka bilaabmaya fadhiga isticmaalaha, waxay u beddeleen qiimaha "NoDisplay" a "Run". Waxa ay tilmaantani ina barayso waa sida loo dhigo qiimaha "Been" dhammaan goobaha isla waqtigaas.
Si tan loo sameeyo waxaan fureynaa qunsulka oo waxaan u dhaqaaqeynaa tusaha meesha qaabeynta ku jirto, oo leh amarka soo socda.
Kadibna waan fulinaa, si aan u dhigno qiimaha "Been" dhammaan codsiyada aan isticmaalno Sed waana fulinaa:
Diyaar, waxaan hadda arki karnaa dhammaan gelitaannadii horay loogu qariyey Codsiyada Bilowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku muuji galitaannada qarsoon ee Ubuntu 11.10 Codsiyada Bilowga
soco aad u faa'iido badan thx!
Ku jawaab ubuntero
mahadsanid waad ii adeegtay !!
Trinity 3.5.13 ayaa la heli karaa: KDE oo loogu talagalay nostalgic
Ruushku wuxuu keydin doonaa 41.785 milyan oo euro oo ah rukhsadaha ruqsadaha